अन्तर्वार्ता Archives - नागरिक रैबार
नेकपा एमाले ललितपुरले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्न अन्तर्वार्ता लिन सुरु गरेको छ । एमाले ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ ले आइतबार मात्र कोञ्ज्योसोम गाउँपालिकाका आकांक्षीसँग अन्तर्वार्ता लिएको छ । अध्यक्षका आकांक्षी कृष्णमान लामा, कृष्ण सापकोटा र कविन्द्र लामा तथा उपाध्यक्षका आकांक्षी रनिता तामाङ र सुनिता तामाङसँग अन्तर्वार्ता लिइएको हो । क्षेत्र नम्बर १ […]
बाध्य भएर नयाँ पार्टी गठन गरेका हौं : राजेन्द्र पाण्डे
काठमाडौँ — नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेता विभाजित भएपछि दुवै पक्षले एकअर्कालाई आरोप लगाइरहेका छन् । माधव नेपाल पक्षले ओलीको कार्यशैलीले गर्दा बाध्य भएर नयाँ पार्टी खोल्नु परेको बताउँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल पक्षका नेता राजेन्द्र पाण्डेसँग गरिएको कुुराकानी पार्टी विभाजनको कठोर निर्णय लिनुभएको छ, कति स्वाभाविक […]
प्रत्येक १०-१० वर्षमा जनगणना गर्ने गरिन्छ । नियमित तालिका अनुसार २०७८ जेठ महीनामा नै जनगणना सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर कोरोना महामारीका कारण यो अझै शुरू हुनसकेको छैन । जनगणनाबाट प्राप्त नतिजालाई तुलनात्मक रूपमा हेर्न भनेर गणनाको निश्चित मिति तोकिएको हुन्छ । त्यसैले १२औं जनगणनाको प्रक्रिया र नतिजा सार्वजनिक हुन ढिलो भएपछि यसले अन्य क्षेत्रमा […]
काठमाडौं । संसद विघटनका विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस आन्दोलनमा जाने भएको छ । मंगलबारदेखि जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैककमा संसद विघटन विरुद्ध संघर्षमा जाने वा मध्यावधि चुनावको तयारीमा लाग्ने भन्नेमा मत विभाजित भए पनि १३ पुसमा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा काँग्रेसले गरेको छ । यता काँग्रेस नेताहरुमा पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको पिरलो छुट्टै छ […]
बाजुरा जिल्लामा असार यता अविरल बर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले साँफे मार्तडी सडकखण्ड छेदविच्छेद् भएको लगभग तीन महिना जति पुग्न लागि सकेको छ । यस विषयमा जन चाँसो राख्ने जो कोहीले सामाजिक सञ्जाल वा नयाँ प्रविधि अनुसारको भर्चअल गफ र नेताहरुको फूर्सदको राजनीति सिबाहेक अरु केही हुन सकेको छैन् । तर, त्यस यता बाजुराली जनताले […]
नेपाल सरकारले लकडाउनलाई हटाएपछि संक्रमणको दर झनै बढ्ने संकेत देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यका लागायत देशका मख्य ठूला सहरहरुमा समुदायस्तरमा संक्रमण देखापरेको छ । संक्रमण दर पनि बढ्दै गएको छ । लकडाउन खुलेसँगै मानिसहरुको आवागमन पनि बढेको छ । संक्रमितहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा संक्रमण फैलिने सम्भावना बढेको छ । यसलाई पछिल्लो समय समुदायमा […]
काठमाडौं १२ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि अब नेकपाभित्रको संकट टरेको अनुमान गरिएको छ । तर, दोस्रो तहका नेताहरुले भने अब यो विषय यत्तिमै टुंगिँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी गरेलगत्तै स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन २० जना स्थायी कमिटीका सदस्यले […]
दशैं मनाउन घर फर्किनेको भीड, नियमितको भन्दा थप गाडीहरु सञ्चालन
रमित विक/असोज १४ बाजुरा। नेपालीहरुको महान चाड बडादशैं हिजोबाट विधिवत रुपमा सुरु भए संगै दशैं मनाउन घर फर्किनेहरुको चाप बढेको छ । यति खेर घर छाडेर बाहिर गएकाहरु दशैँ मनाउन घर फर्कीन थालेका छन् । विशेष गरी कामको लागि देशका विभिन्न भु–भाग र भारतका विभिन्न स्थानहरुमा गएका तथा अध्ययनको शिलशिलामा जिल्ला बाहिर गएकाहरु यतिखेर सामुहिक […]
डा. रामशरण महत नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता हुन् । देशमा सबैभन्दा धेरैपटक अर्थ मन्त्रालय सम्हालिसकेका डा. महत यतिबेला पार्टीको काममा व्यस्त छ । आगामी महाधिवेशनका लागि नेताहरुले जिल्ला दौडलाई तिब्रता दिइरहेका बेला डा. महत पनि यो दौडमा सहभागी छन् । उनै डा. महतसँग हामीले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद, सरकारका पछिल्ला गतिविधि, सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन […]